Xaasaska Hoggaamiyeyaasha Afrika oo Farriin Ka Soo Saaray Shirka Madaxweyneyaasha Ee Rwanda | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Xaasaska Hoggaamiyeyaasha Afrika oo Farriin Ka Soo Saaray Shirka Madaxweyneyaasha Ee Rwanda
Kigali (Hubaal/QJN) – Iyadoo uu haatan ka socdo shir caalami ah magaalada Durban ee dalka Koofur Afrika kaasoo looga hadlaayo sidii wax looga qaban lahaa cudurka AIDS ayaa xaasaska madaxweyneyaasha dalalka Afrika waxay wacad ku mareen inay wax ka qabtaan cudurkaa dilaaga ah. Cudurka AIDS-ka ayaa waxaa dhaliya dullinka HIV kaasoo ah feyras aan daawo loo heyn ilaa iminka. Inkastoo uu soo shaac baxay sanadihii sideetameeyadii cudurkaa wax daawo ah looma helin iyo tallaal midna walow la sameeyay daraasado iyo dadaalo badan oo kusaabsan sidii xalal loogu heli lahaa. Cudurkaa oo cabsi weyn dhaliyay caalamka oo idil tan iyo markii uu soo shaacbaxay ayaa waxaa qiyaastii ilaa iminka dadka qaba ay gaarayaan 36 milyan dadkaas oo badankoodu ku nool yihiin qaarada Afrika gaar ahaan qeybteeda ka hooseysa saxaraha.
Dhanka kale ayaa shir ay yeesheen xaasaska madaxweyneyaasha qaarada oo barbar socday shirka 27aad ee Rwanda kasocda ee madaxda Afrika ayaa waxaa lagu soo qaaday arinkaa oo kuyimid mawduuc kusaabsan caafimaadka dhanka taranka ah iyo arimaha dhallinyarada oo ay haweenkaasi niqaasheen.
Ayadoo ka hadleysay shirkaa ayaa xaaska madaxweynaha Rwanda Jeannett Kagame ay sheegtay in la gaaray waqtigiii ay madaxdu isweydiin lahaayeen waxa ay tahay in la sameeyo si loo xoojiyo nidaamyada dhammaan qeybaha qaarada oo idil.
Shirkaa ayaa waxaa ka qeyb qaatay haween kale oo ka kala socday dalalka Kenya, Mozambique iyo Rwanda.